Ebee Ka I Nọrọ na Santorini | Otu Di na Nwunye
Ịhọrọ ebe ị ga-anọ na Santorini, Gris bụ otu n'ime mkpebi ndị dị mfe i nwere ike ime na njem. Ntak-a? Ọ dị mfe - n'ebe ahụ is ọ dịghị ebe ọjọọ ịnọ (ma ọ bụ kama nke ahụ,) Santorini.
Obodo agwaetiti kachasị ewu ewu na Gris, nke a maara maka ụlọ ya na-acha anụnụ anụnụ na ebe a na-acha ọcha, bụ otu n'ime ebe kachasị ese foto na ụwa, yana ebe ndị njem nleta na-aga. Ọ bụ otu n'ime ebe ndị ahụ ị -eche ga-ama mma tupu ị gaa, ma ịchọta na ọ dị anya, na-adọrọ mmasị karia foto ọ bụla.
Santorini bụ Island Greek, nke dị naanị 45 nkeji si Athens, site na ikuku. Ụdị ọdịdị nke àgwàetiti ahụ, nke dị ntakịrị nke na-asọpụta Oké Osimiri Aegean, bụ n'ezie ihe fọdụrụ nke ihe buru ibu, n'àgwàetiti mgbawa. Mgbe ọtụtụ puku afọ nke mmebi ihe omimi, gụnyere Minoan a ma ama na 2nd na narị afọ gara aga TOA, gbawara àgwàetiti ahụ - na-ahapụ Santorini dịka ala fọdụrụnụ nke lanarịrị.
Map - Obodo kacha mma nke Santorini, hotels, na ebe
A na-ekewa agwaetiti ahụ n'ime ọtụtụ obodo nta, obodo nta, na ógbè. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ nanị ihe dị ka kilomita ole na ole, n'enweghị obere ohere ịhapụ ókèala nke ọ bụla. Onye a ma ama n'etiti ndị a bụ Ee, nke dị n'ebe dịpụrụ adịpụ nke agwaetiti, na Fira, etiti obodo ahụ na nke kacha nso n'ọdụ ụgbọelu ahụ.
E nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ gbasara ebe ị ga-anọ na Santorini, Otú ọ dị, anyị ga-adaba na Ọ bụghị nani na Fira, mana ole na ole n'ime obodo ndị ọzọ a maara nke ọma na-abanye, na ihe mere ị ga-eji tụlee ebe ndị ahụ na ihe ịchọrọ ịhụ ma mee na Santorini. (Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndị ọzọ gbasara do na Santorini, lelee ndepụta zuru ezu nke ihe ị ga - eme na Santorini).
Ee bụ onye a ma ama dị ka ebe nke nnukwu foto ọdịda anyanwụ ị hụrụ site na ndị ọbịa na Santorini - ị mara nke a. Foto nke oké osimiri na-acha uhie uhie, nke na-acha anụnụ anụnụ na mgbidi na-acha ọcha (n'ezie, ikike maka ụlọ niile dị n'obodo ahụ bụ na a ga-ese ha ọcha n'èzí).
Ọ dị mma nke ukwuu, ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ na Santorini.
Ntre, nso idi mfịna? Ntak emi idịghe onye ọ bụla biri na Oia? Ọfọn, iji nweta echiche dị mma, ụdị ịchọrọ ịchọrọ na Ya, ị ga-akwụ ụgwọ maka ya. Ndị njem si $ 300 USD gaa $ 1,000 USD kwa abalị, na elu. Enwere oke njirimara nhọrọ ndị na-adịchaghị, mana ị na-achụ àjà ahụ.
Ebee ka ịnọ: Esperas Santorini bụ otu n'ime ebe kachasị amasị anyị na Ee, ma dị nwayọ (n'ihi na Oia) site na ọnụahịa. Ụlọ na-amalite na $ 250 USD kwa abalị.
Fira (ma ọ bụ, Fira Town, dị ka ndị obodo na-akpọ ya)
Fira bụ isi etiti nke àgwàetiti ahụ, nke dị ihe dịka elekere 25 nke si na Ee. Ọ bụ ezie na ị gaghị enweta otu ọdịda ọdịda anyanwụ site na Fira, ọ bụ njem dị mkpirikpi ka Ị nweta foto gị. Ọzọkwa, Fira Town dị ezigbo mma, otu n'ime ebe kachasị amasị anyị ka anyị nọrọ na Santorini.
Ebe a bụ ntakịrị ihe ndị ọzọ, na-agwakọta elu-njedebe, ọnọdụ dị oke ọnụ ahịa nke nwere oke ọnụ (ma ka dị mma) hotels ndị na-ele nnukwu mmiri si Santorini, na ugwu mgbawa. Ọzọkwa, Fira bụ otu n'ime ebe kachasị mma maka nri, na-egosipụta ihe niile site na ịnọdụ ala, ụlọ ọrụ nke ehihie na abalị niile na-agagharị ahịa ụlọ ahịa ndị na-eme njem nlekọta na-atọ ọchị.
Ebee ka ị ga - anọ: Anyị na - ele mmadụ anya n'ihu Ụlọ nke Theoxenia. O nwere ike ịbụ na ọ bụghị ihe kachasị mma na nhọrọ nke ụlọ ahụ bụ "ihe mara mma", ma ọ ka dị mma, saa mbara, na ọrụ na uru dị ịrịba ama. N'eziokwu, mgbe m na-arịa ọrịa na Santorini, ha nyere anyị nkwalite na-aga n'ihu na ụlọ na-eche ihu na Caldera dị ntakịrị na ala. Ugbu a, nke ahụ bụ fancy!
Pyrgos nwere echiche dịgasị iche banyere Santorini, ọ bụkwa obodo kachasị elu na-ekwu banyere elu ugwu dum. Ọ bụ ezie na Pyrgos enweghị echiche ị ga-ahụ na Fira ma ọ bụ Thera, ọ bụ naanị 10 nkeji ụgbọala site na Thera, ma nwee obere akara ụkwụ njem nleta.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-anọ na Santorini, na ịchọrọ ka ihe dị ntakịrị karịa nke nwere mmetụta nke obodo Grik n'ezie, gbalịa Pyrgos. Ntak-a? Lezienụ anya na foto anyị họọrọ na ị ga-ama! Pyrgos nwere ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị mma n'àgwàetiti ahụ, ha niile na-agbarịrị ọnụ ala karịa ihe ị nwere ike ịhụ na Oia ma ọ bụ Santorini.
Ebee ka ịnọ: Ụlọ Ahịa Art na Pyrgos dị ịtụnanya, a pụkwara inwe ntakịrị $ 100 USD kwa abalị.
Ọ bụrụ na aha ahụ bụ "Akrotiri" maara nke ọma, ọ kwesịrị ịdị. Nke a bụ n'ezie ịhụ mmepe obodo Minoan furu efu bụ nke na-abụ ebe ngbacha ọkụ kemgbe 1967. N'ezie, ụfọdụ kwenyere na Akrotiri nwere ike ịbụ mkpọmkpọ ebe nke Plato kwuru dị ka Obodo Ntufu Atlantis!
Ma Akrotiri bu obodo omimi nke ozo ma obu akuku abughi ihe na-esemokwu, o ka bu ebe di mma. Akrotiri bụ ala dị ala, na-etinye ebe dị mma na oke osimiri aja aja nke dị n'ebe ndịda nke Santorini.
Ebee ka ịnọ: Ọ bụ ezie na enweghi plethora nke hotels na akrotiri, ndị dịnụ dị mma, dị ala, na ezumike. Gbalịa Obodo Mathios - ihe dị egwu nke dị nso n'ụsọ osimiri na mkpọmkpọ ebe.
Megalochori bụ ebe a na-echekarị na ọ dị na ndepụta nke ebe ị ga-anọ na Santorini, mana ọ ga-adị. Megalochori bụ n'ezie obodo ochie, nke mbụ, na ezigbo obodo nke bụ isi bi na North Akrotiri, ma ka na-aga na njedebe ndịda nke àgwàetiti ahụ - n'okpuru Fira. Ufuru ya na osisi osisi ya, okporo osisi cobbled bu ihe ndi ozo di egwu, na ebe a na Santorini anyi huru n'anya n'ezie.
Ọ mara mma, dị oke mma, na dị ka ihe ọ bụla dị na Santorini, nso ihe niile ịchọrọ ịhụ. Ihe oriri a magburu onwe ya, obodo ndị ahụ dịkwa ezigbo mma.
Ebee ka ịnọ: Villa Aegeon bụ ebe dị mma, nke dị obere, nke nwere ebe mara mma nke Santorini.
Amoudoudia bụ ebe dị mma na Santorini nke bụ n'ezie obere ọdụ ụgbọ mmiri dị n'ebe ugwu - ọbụna karịa Ọ. Ihe owuwu na nri dị iche iche dị ịtụnanya, dịka a na-ejide azụ ndị dị n'Ebe Aegean ọhụrụ, kpochachaa, ma na-eje ozi mgbe ụfọdụ n'ime otu awa ma weta ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ n'anya anụmanụ, ọ bụkwa ebe dị mma maka otu akụkụ Santorini - nwamba! A maara Santorini maka ọnụ ọgụgụ nwamba ndị dị n'àgwàetiti ahụ, ebe ụfọdụ nwere ọtụtụ karịa ndị ọzọ. Unu echegbula onwe unu, ndị enyi ibe unu, nwamba ndị a jupụtara na nri, ndị nwere obi ụtọ na ndị mara ezigbo mma. Naanị hụ obere enyi anyị na foto ahụ!
Ebee ka ịnọ: Ammoudia adịghị ọnụ, ma nhọrọ dị ole na ole. Ị nwere ike ịbanye ọtụtụ hotels na gburugburu $ 50-60 USD kwa abalị, ma ha ga-adị mfe ime ụlọ (ọ bụ ezie na ọ dị ọcha ma dị mma). Anyị na-achọ Villa Ikaros dị ka ọnụ ala, ebe dị mma maka ịnọ.
Karterados bụ obodo dị n'azụ Fira Town, ntakịrị n'ihu ihu Fira ebe ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị. Ọ dị mma, Otú ọ dị, na e nwere ụzọ site na Karterados nke na-eduga n'ọdụ ụgbọ mmiri Exo Gialos, osimiri ndị dịpụrụ adịpụ nke nwere obere nkume na-acha ọkụ ọkụ na nke mara mma, na-acha anụnụ anụnụ, mmiri.
Ọzọkwa, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị enyi anyị!
Ebee ka ịnọ: Ikaros Hotel dị obere, dị jụụ, na ọnụ ọnụ na ngwa ngwa iji nweta Fira Town.
Ọ bụ ezie na e nwere obodo nta ndị ọzọ na ebe dị na Santorini, asaa ndị a kwesịrị inye ihe dị mkpa maka ndị njem na mmefu ego niile na-achọ ebe ha ga-anọ na Santorini. Lelee nkwenye anyị, ma nwee oge gị na Santorini!
Ezigbo njem njem maka Santorini
Santorini Map - Mee atụmatụ njem gị na Santorini na map a
Expedia.com - Ebe obibi maka ego ma ọ bụ nnukwu ụgbọ elu na hotels dị na Santorini.
Akwụkwọ ntụziaka a tụrụ aro: Okpokoro Gris nke uwa
Akwụkwọ na-atụ aro: Ụzọ nke Santorini
Category: ụlọ, Europe, Greece, Hotels, kasị Popular, Nhazi njem Tags: akrotiri, obodo obodo, Greece, hotels, megalochori, ya, santorini, ebe ịnọ
← Ebee Ka I Nọrọ na Barcelona
Chef And The Dish: Ahụhụ zuru okè maka Foodies International →
8 Comments na "Ebee Ka I Nọrọ na Santorini"
Ọ bụ ihe dị ukwuu ịmata ebe a na-enye ihe na Santorini. Karịsịa ọ dị mma ịmata ebe anyị nwere ike ịhụ ọdịda anyanwụ kacha mma. Ebe ndị ọzọ na-abụghị Fira na Oia bụ na njem nlegharị anya yiri ka. Ọ ga-amasị gị ileta ndị ahụ.
Daalụ! I nwere ike ime - ọtụtụ n'ime ebe ndị ọzọ dị mma ma nọrọ jụụ. N'ikwu okwu, ọnụ ọgụgụ dị ole na ole nke ndị njem nleta.
Santorini bụ nrọ zuru ezu! Nwa nwanne nna m na enyi ya nwoke nọ ugbu a, o yikwara ihe ịtụnanya! Nke a post dị nnọọ nkọwa ma nyere aka ma m ga-eso ya ugbu a! Daalụ maka ịkekọrịta!
Anabata gị, Annick!
Stephanie | naFantasia.com
Santorini bụ ebe ịchọta ndepụta ịwụ maka ọtụtụ ndị na enwere m obi ekele maka otu esi mebie ya ebe a! Anọ m na Fira kama ọ ga-adị m mma na m nọrọ oge na Ya iji jide ụda anyanwụ!
Daalụ maka ịgụ ihe, Stephanie, ma nwee obi ụtọ na ị na-enwe mmasị n'ọkwá ahụ! Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị amasị anyị
Anyị nwere ọtụtụ ihe nkiri Indian na-agba na Santorini na ọ dịka akụkọ ụfọdụ. Ọnọdụ ebe mmiri na-acha anụnụ anụnụ na ụlọ ndị na-acha ọcha na nke na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka ọ mara mma!
Daalụ, Meenakshi! Na-enwe obi ụtọ na ị nwere mmasị na post!